Kyaw Zay Ya » Archives » 2007 » March
Kyaw Zay Ya Random Of My Life Monthly Archives: March 2007	March 18th, 2007
2 ကျနော်နှင့်အင်တာဗျူးများ ကျနော်..တစ်နေရာရာရောက်တိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာဖြစ်စမြဲပါ…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့..ကျနော်တို့အလုပ်လာလုပ်နေတာက..နိုင်ငံရပ်ခြား၊ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာစကားခြားနားတဲ့နေရာပါ..
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြဲလိုလိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေမှကိုယ့်အတွက် တော်တော်တန်တန် အန္တရာယ်လောက်တော့..ရှောင်ကွင်းနိုင်မှာမဟုတ်လားခင်ဗျာ…..
တစ်ခါတုန်းက..တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုရောက်တုန်း..အဲဒီမှာ…ကျနော့်ရယ်..ကျနော့်သူငယ်ချင်းရယ် အစားအသောက်မှာမလို့..စဉ်းစားနေရင်း (ဘာမှာလို့..မှာရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ)..ကိုယ့်အချင်းချင်းမြန်မာလိုပြောကြတော့.. ဘေးနားမှာရပ်စောင့်နေတဲ့..တရုတ်မ(အစကတော့…တကယ့်တရုတ်မထင်နေတာ..သူ့ကလည်း..ရှမ်းတရုတ်စပ်ထင်သည် အသားအရည်က ဖြူစပ်စပ်နှင့်တရုတ်လိုလဲလည်လည်ပတ်ပတ်ပြောနိုင်သည်)
“ရွှေဘဲ”ဟ(ရွှေဘဲဆိုလို့ မန္တလေးက..“ရွှေဘဲ” စားသောက်ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူး “မြန်မာအချင်းချင်း”ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်..)ဆိုပြီး..
“အစ်မရယ်..ကျနော်တို့ မမှာတတ်လို့ပါ..ထမင်းနဲ့ဟင်း ရရင်ဖြစ်ပါတယ်”လိုဆိုတာ့ အဲဒီ…“မရွှေမ”(နာမည်လွှဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..) ကဘဲ..ဘယ်အမျိုးအစားက ဘယ်ဈေး…
၄င်းကိုယ်တိုင်ဘဲ..မှာကြားပေးပါတယ်…အဲဒီမှာ..ကျနော်ရဲ့စပ်စုလိုစိတ်က..တဖွားဖွားဖြစ်လာပြီး..ကျနော့်သူငယ်ချင်းတားမြစ်နေသည့်ကြားမှ “မရွှေမ”ကို..ကျနော့်အင်တာဗျူးပါတော့တယ်(ဗျူးလို့ဗျူးမှန်းမသိအောင်တော့ နည်းနည်းစကားကိုဆင်ခြင်ရတာပေါ့ခင်ဗျာ…)
ကျနော်။ ။ “အစ်မ..မလေးရှားကိုရောက်နေတာကြာပြီလား”
မရွှေမ။ ။ “သိပ်မကြာသေးဘူးမောင်လေးရဲ့(၁)နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ဘဲ..ရှိသေးတယ်”
ကျနော်။ ။ “အပေါ်လမ်းကလာတာဘဲလားအစ်မ”
မရွှေမ။ ။ “မဟုတ်ဘူးမောင်လေးရေ…ထိုင်းကနေတဆင့်လာတာ..ထိုင်းကိုတော့တရားဝင်..ပေါ့” (သူကတော့ နည်းနည်းပွင့်လင်းပုံရသည်..တစ်ချို့များကြတော့ တရားဝင်မဟုတ်သော်လည်း..သူများမေးလျှင် တရားဝင်ပါဟု..ပြောချင်ပြောတတ်ကြသည်…ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိ..)စကားပြောနေရင်းကနေတခြား
၀ိုင်းများက အော်ဒါမှာပိုက်ဆံရှင်းကိုလဲ..ပြေးလုပ်ရသေးသည်။ သူ့ခမျာလည်း..ရွှေမြန်မာလို..မပြောရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သဖြင့်..တော်တော်လေးကျနော်တို့နှင့်စကားလက်ဆုံကျချင်ပုံရသည်.။
ကျနော်။ ။ “ဟ..အစ်မက..တော်တော်လေးသတ္တိရှိတာဘဲဗျ”..ဒီမှာ…ဒီလောက်အဖမ်းအဆီးများနေတဲ့ဟာ.. ဘယ်လို..နေသလဲဗျ..” မရွှေမ။ ။ “ဒီလိုဘဲပေါ့..မောင်လေးတို့ရယ်..ဖမ်းတော့လဲ..လိုက်သွားရုံဘဲပေါ့..ဘာများတတ်နိုင်မှာတုန်း”
ကျနော်။ ။ “ဒါဆို..အစ်မတစ်ခါမှ..အဖမ်းမခံရသေးဘူးပေါ့နော်..”
မရွှေမ။ ။ “တစ်ခါ..အဖမ်းခံရပြီးပါပြီ..ဒီလိုဘဲ..ပြန်တက်လာတာပါဘဲ”..
ကျနော်။ ။ “ဟ..လွယ်လှချည်လား..အစ်မရယ်..ဒါနဲ့ဖမ်းပြီးတော့..သူတို့က..ဘယ်ကိုပို့တာလဲဗျ..”
မရွှေမ။ ။ “ထိုင်းနယ်စပ်ကိုပြန်ပို့တာဘဲ” ကျနော်။ ။ “ဒီကရဲတွေက..ဖမ်းပြီး..ဒီလိုထိုင်းကိုသွားပို့နေကြဘဲလားအစ်မ” မရွှေမ။ ။ “ဟုတ်တယ်လေ…ထိုင်းနိုင်ငံထဲအထိတော့မဟုတ်ပါဘူး..ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနယ်စပ်နေရာလေးပါ”
ကျနော်။ ။ “ဘာလဲ..အစ်မတို့က..ထိုင်းနယ်စပ်ကလာလို့..ထိုင်းနယ်ထဲကိုပြန်ပို့တာလား..ဟိုမှာ..တရားဝင် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေလက်ထဲကို..ပြန်လွှဲပေးတာလား.”
မရွှေမ။ ။ “မဟုတ်ပါဘူးကွယ်…ဟိုမှာ..လူပွဲစားတွေရှိတယ်ကွယ့်”
ကျနော်။ ။ “ဗျာ…လူပွဲစား..ဟုတ်လား..အစ်မ..ဘယ်လို..ဘယ်လို..ကျနော်..နားမရှင်းလို့”
မရွှေမ။ ။ “ဒီလိုလေ..မောင်လေးရယ်..သူတို့က..ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေ..မသိအောင်..ထိုင်းနယ်စပ်ထဲကို..သွားပို့တာ မဟုတ်လား..အဲဒီမှာ..သူတို့နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီး..လုပ်စားကြတယ်ထင်တာဘဲ..”
ကျနော်။ ။ “လုပ်စားကြတယ်…ဟုတ်လားအစ်မ..ဘယ်လိုများ..လုပ်စားကြတာတုန်း..”
မရွှေမ။ ။ “အစ်မတို့..နယ်စပ်ကိုရောက်သွားတော့မှောင်ရီဖြိုးဖျအချိန်လေးကွယ့်…ရောက်တာနဲ့..ကားတစ်စီးပေါ်ချက်ချင်းတက်ခိုင်းပြီး..တစ်နာရီလောက်မောင်းသွားတာနဲ့..အဆောက်အဦးတစ်ခုထဲမှာ နေခိုင်း.လိုက်တာပါဘဲ..နောက်တစ်နေ့..မနက်ကျတော့..လူအကုန်လုံးကိုလိုက်မေး..ဘယ်သွားမှာလဲ..မလေးရှားပြန်သွားချင်လား..ဒါမှမဟုတ်..မြန်မာပြည်ကိုပြန်ချင်လားပေါ့..”
ကျနော်။ ။ “မြန်မာစကားတတ်တဲ့လူ..ရှိတာဘဲလား..အစ်မ”
မရွှေမ။ ။ “အကုန်မြန်မာတွေချည်းဘဲကွယ့်”..
ကျနော်။ ။ “ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း..ဒီလိုလုပ်ရသလားအစ်မရယ်”…
မရွှေမ။ ။ “ဘာလဲ..မင်းတို့က..အစ်မပြောတာ..မယုံလို့လား…မယုံရင်..မင်းတို့..မြန်မာပြည်ပြန်ရင်အောက်လမ်းကနေပြန်ကြည့်လေ..”
Tweet This Post အင်တာဗျူး March 14th, 2007
0 ရောက်တတ်ရာရာလေးများ(၂၈) ခုတစ်လော..ကျနော်..အလုပ်တော်တော်များနေပါတယ်ခင်ဗျာ..များဆို..သူများအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း တွေချည်းဘဲ…လိုက်လုပ်နေလို့ပါ…နောက်တစ်ချက်က…ရုံးက..မန်နေဂျာက…အချိန်တိုင်းလိုလိုရှိနေလို့…Blogger ဘက်ကို..လုံးဝမလှည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်…Internet ကိုလုံးလုံးမတက်နိုင် တာဗျာ….ကိုယ်က..လုပ်မယ်ကြံတိုင်း…သူက..ကိုယ့်စားပွဲနားရောက်လာပြီး..ဟိုဟာ..ညွန်ကြား…ဒီဟာ..ညွန်ကြားရင်းဆိုတော့..ဘာမှကို..လုပ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်…. နောက်ပြီး…ကျနော့်…အလုပ်ထဲက ရွှေမြန်မာညီအစ်ကိုမောင်နှမများစုပေါင်းပြီး…မြန်မာသင်္ကြန်လုပ်မယ်လို့…ကြံစည်ထားတော့…ဖြစ်မြောက်အောင်..၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးရ…ပိုက်ဆံကောက်ရနဲ့..အလုပ် တာဝန်လစ်ဟင်းမှာလဲစိုးရိမ်….သင်္ကြန်အတွက်…စီစဉ်ရနဲ့…တစ်ယောက်တည်းကို..လုံးလည်ချာလည်လိုက် နေတာပါဘဲဗျာ…..အဲဒီထဲကမှ…ကျနော်..Blog အတွက်..ရေးသားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါရစေ… ဘာဖြစ်လို့..ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့..တော်တော်ကြာ..“မလေးရှားကနေ..ထွက်ပြေးသွားပြန်ပြီလား”လို့ Cbox မှာ..လာအော်ကြမှာကို..ကြောက်လွန်းလို့ပါ…ဟုတ်ကဲ့ပါ..“မလေးရှားနိုင်ငံကိုအောက်လမ်း ကနေ၀င်ရောက်လာပြီး…ထိုင်းနိုင်ငံမှာ..သောင်တင်နေကြတဲ့..ရွှေမြန်မာများအကြောင်း” ကိုရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်…အချက်အလက်များလည်းစုဆောင်းနေပါတယ်….မကြာမီ..လာမည်..မျှော်…ပါ..ခင်ဗျာ. Tweet This Post ရောက်တက်ရာရာလေးများ March 4th, 2007
5 ပြောမယုံကြုံဘူးမှသိ…. နေခြည်မိုးသောက်အလင်းရောက်ပြန်ပေါ့တစ်ခါ..နေ့စဉ်နေ့တိုင်း…မနက်မိုးလင်းတာနဲ့…အလုပ်ကိုမြန်မြန် ရောက်အောင်သွား…တစ်နေကုန်.အလုပ်လုပ်..နိစ္စဓူဝလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့…မိုးလင်းတာလည်း…ကိုယ့်အတွက် အဆန်းတကြယ်မဟုတ်တော့..မိုးချုပ်တာလည်း..အဆန်းတကြယ်မဟုတ်တော့..တစ်ခါတစ်ခါ..ပြက္ခဒိန်ကြည့် မိမှသာ…အော်..“ငါ..မလေးရှားကိုရောက်နေတာ..ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကြာသွားပြီ” အဲဒီလိုအချိန်ကျမှ ပြန်တွေး မိသည်…နားရက်ရောက်တော့လည်း..ဘယ်မှဟိုဟိုဒီဒီမသွားဖြစ်..ဘယ်သွားဖြစ်မလဲ…နားရက်က တနင်္ဂနွေ(၂)ပါတ်မှ(၁)ရက်နားရသည်ကိုး…အဲဒီတော့..(၂)ပါတ်လုံးပင်ပန်းထားသမျှ..နားရက်ကြမှဘဲ…အတိုးချနားဖြစ်သည်..တစ်နေကုန်ဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့..အိပ်ပစ်လိုက်တာကများသည်…ဒီလိုနဲ့လုံးလည်ချာလည် လိုက်ရင်းနဲ့မလေးရှားမှာအချိန်တွေကုန်နေတာကများသည်…ကဲ..ဒီနေ့တော့..မနားဘဲနဲ့…Kuala Lumpur မြို့လယ်ခေါင်သွားပြီးစားချင်တာလေးများ…သွားစားပြီး…ဖတ်ချင်သည့်စာအုပ်လေးများသွားဝယ်လိုက်ဦးမည်.. မနက်မိုးလင်းတော့..အိပ်ရာကစောစောထ…သိပ်အပျင်းကြီးနေလို့မဖြစ်..တော်တော်လေးနောက်ကျသွားလျှင် ဖြင့်..Kuala Lumpur မြို့လယ်ခေါင်တွင်..လူတွေထူထူထပ်ထပ်..နေကလဲ..ကျဲကျဲတောက်ပူ..လမ်းခရီးသွား ရတာသိပ်မကောင်းတော့ပေ…အိမ်ကနေ..ကားမှတ်တိုင်ကို…၃မိနစ်လောက်တော့လမ်းလျှောက်ရသည်… အိမ်အောက်ထပ်ရောက်တော့…အလုပ်တစ်နေရာတည်းတွင်…အတူတူလုပ်သည့်…မလိုင်ကောင်လေး(မလေးနိုင်ငံသားကို ကျနော်တို့ရွှေမြန်မာများက..မလိုင်လို့ခေါ်သည်) များနှင့်တွေတော့သည်…ဒီကောင်တွေ ကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့် ဘယ်တော့မှ အပိုးမကျိုး….ဘယ်အပိုးကျိုးမလဲ..ဆံပင်ကနီကြောင်ကြောင်နဲ့..၀တ်ထား စားထားသည်ကလဲ…ထောင့်မကျိုး…မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေတ၀ီဝီနဲ့…အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်များထဲက… လမ်းသရဲများနှင့်တော်တော်လေးတူသည်…ကျနော့်ကို တွေ့တော့…“Awak pergi mana?” (ဘယ်သွားမလို့လဲ)..“Aku nak pergi Kuala Lumpur Lah Adik” (ငါကေအယ်လ်ခဏသွားမလို့ ညီလေး)“Awak Ikut sama Sakali Saya lah” (ခင်ဗျား..ကျနော်နဲ့တစ်ခါတည်းလိုက်ခဲ့ပါလား)“Terima Kasih Adik…Saya mahu Jumpa kawan, Lain Kali Saya Ikut Lah”(ကျေးဇူးဘဲ..ညီလေး..ငါအခု..သူငယ်ချင်းနဲ့သွားတွေ့မလို့..နောက်မှဘဲလိုက်မယ်နော်..)စကားမြန်မြန်ဖြတ်ပြီး…ကားမှတ်တိုင်သို့သွားထိုင်နေလိုက်သည်…နောက်ထပ်(၁၀)မိနစ်လောက်နေတော့ ကားရောက်လာပြီး..ကားပေါ်တက်..RM2 ပေးလိုက်..နောက်နာရီဝက်လောက်စီးလိုက်ရင်ဖြင့်..Kuala Lumpur သို့ရောက်သွားသည်…ဒီမှာနေရတာ…အဲဒါတစ်ခုတော့..စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းသည်…ဘယ်သွားချင်လဲ…ရောက်လား..မရောက်လားမေး…မမေးတတ်လျှင်လဲ…ကားရှေ့လေကာမှန်များတွင်..ရောက်သည့်နေရာ များကို Sticker များနှင့်ကပ်ထားသည်…မိမိသွားလိုသည့်နေရာကိုပြောလိုက်ရုံသာ..အရင်တုန်းကတော့…ကားဒရိုင်ဘာဘေးနားလေးတွင်..ပိုက်ဆံထည့်ပြီးလက်မှတ်ယူရသည့်စက်များပါသည့်ကားများ..ခုတော့..လက်မှတ်ရောင်းများပါသည့်ကားများတော်တော်များများဖြစ်လာပြီ..လက်မှတ်ရောင်းမပါသည့်ကားများက… အစိုးရပိုင်များ..မိမိသွားလိုသည့်နေရာ..ခရီးအကွာအဝေးကိုပြော..စက်ထဲကိုပိုက်ဆံထည့်ပြီး..လက်မှတ်ယူရုံသာ..လက်မှတ်ရောင်းများပါသည့်ကားများက..ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်များဖြစ်သည်….. ကျနော်သွားချင်သည့်နေရာက..Kota Raya နား..အဲဒီနားပတ်ပတ်လည်တွင်..ရွှေမြန်မာဆိုင်များ..တော်တော် များများရှိသည်…အလုပ်ဆင်းသည့်(၂)ပါတ်လုံးလုံး..ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ချည်း..နှစ်ပါးသွားနေသည့်ဆိုတော့… တစ်ခါတစ်လေ..Kuala Lumpur သို့သွား…ရွှေမြန်မာဆိုင်များကိုဝင်..မုန့်ဟင်းခါးလေးစား..ဖတ်ချင်သည့် စာအုပ်ကလေးများဝယ်…ဒီလိုဘဲ….အမိမြန်မာပြည်ကြီးအား…အလွမ်းဖြေရသည်မဟုတ်လားခင်ဗျာ…..ကားပေါ်ကဆင်း…Kota Raya နားသို့ရောက်ရောက်ချင်းဘဲ..တွေ့ပါပြီဗျာ..ယူနီဖောင်းဝတ်နှစ်ကောင်….. ၀ါယာလက်ကားနှင့်…လမ်းပေါ်တွင်သွားလာနေသည့်သူများအား…IC, Passport တောင်းယူကြည့်ရှုပြီး..စစ် ဆေးနေသည်..ကျနော်ကလည်း..ဒါမျိုးက..မြင်တွေ့နေရသည်မှာ..ရိုးနေပြီဖြစ်သဖြင့်…သိပ်အလေးအနက် မထားဘဲ..အနားကနေဖြတ်လျှောက်သွားမိသည်…ခါတိုင်းဆိုလျှင်ဖြင့်…ကြားဖူးနားဝစကားများနှင့်တခြား လမ်းကနေ..ရှောင်ကွင်းသွားနေကျ…အဲဒီနေ့ကျမှ…ကိုယ်တော်ချောများက..ကျနော့်ရှေ့ကရပ်၍ “IC ”တဲ့.. ကျနော်က..နိုင်ငံသားမဟုတ်တော့..ပါလာသည့်..Passport လေးအားထုတ်ပြပြီး..ကားနားတွင်..အသာလေး ရပ်စောင့်နေလိုက်သည်..ကိုယ်တော်ချောတစ်ကောင်က…ကားထဲသို့ဝင်သွားပြီး..ကျနော့် passport အားကြည့်လိုက်..ဝေါ်ကီတော်ကီပြောလိုက်လုပ်နေပြီး..ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့..ထွက်လာပြီး…“မင်း ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တာလဲ” “အခုဘယ်သွားမှာလဲ” စသည်ဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ဖြင့် စတင်ရစ်ပါတော့တယ်…ပြီးတော့..“မင်းရဲ့Passport ကိုငါတို့သိပ်မသင်္ကာဘူး” ဘာဖြစ်တယ်..ညာဖြစ်တယ် လုပ်ပြီး..ကျနော့်.ကိုယ်ပေါ်..ဟိုရှာဒီရှာလုပ်လာသည်…လမ်းလယ်ခေါင်ကြီးမှာဆိုတော့ လူတွေက၀ိုင်းကြည့်နေကြသည်…ပြီးလဲပြီးရော..“ကဲ..ကားပေါ်တက်” ဆိုပြီး..နှစ်လမ်းကျော်..သုံးလမ်းလောက် မောင်းသွားပြီး..“မင်းမှာပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပါသလဲ”တဲ့..“မင်းကိုငါတို့ဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ချင်ဘူး”ဆိုပြီး.. ပိုက်ဆံတောင်းပါတော့သည်….ကဲနောက်ဆုံးတော့..မထူးပါဘူးလေ…ကျနော်ကလဲ..သိပ်ပြဿနာမဖြစ် ချင်တာနဲ့..RM50ပေးပြီး..လိုရာခရီးဆက်သွားလိုက်ပါတယ်…အဲဒါပါဘဲဗျာ..ကျနော်တို့ရွှေပြည်ကြီးက..ယူနီဖောင်းဝတ်များသာ…လဘက်ရည်သောက်တတ်ကြသည်မဟုတ်…မလေးရှားက..ယူနီဖောင်းဝတ်များလဲ.. လဘက်ရည်ကြိုက်ကြတယ်ဗျ……ပြောမယုံ..ကြုံဘူးမှသိဘဲဗျို့….
Tweet This Post Uncategorized March 1st, 2007
0 ရောက်တတ်ရာရာလေးများ(၂၇) ကျနော် ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုတော့…တစ်နေ့နေ့မှာအကောင်အထည်ပေါ်လာလိမ့်နိုးနိုးနဲ့..မျှော်လင့် စောင့်စားနေရတာ….ကိုစိုးဇေယျရဲ့Blogကို..၀င်ဖတ်မိတဲ့အချိန်မှာတော့..ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာ..သိလာရ ပါတယ်…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့..သူ့ရဲ့ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်..ကျနော့်တို့..မြန်မာBloggerတော်တော်များ များရဲ့အရေးအသားများကိုစာမျက်နှာပေါ်မှာဖတ်ရပါတော့မယ်..ကျနော်..မြန်မာ..Blogger အသိုင်းအ၀ိုင်း လေးကိုဖြစ်စေချင်တာ..ကြာပါပြီ…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့…တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီရေးနေကြတဲ့အရေးအသား လေးများကို..တစ်နေရာတည်းမှာစုစုစည်းစည်းမြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့..ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့အရသာ ဖြစ်မလဲ..စဉ်းစားသာကြည့်တော့ဗျာ..အရင်တုန်းက..ကိုညီလင်းဆက်တို့လုပ်တာတွေ့ရတယ်….Myanmar Blogger Directory ဆိုတဲ့Blog အဲဒါလေးကို ကျနော်..အရမ်းသဘောကျတာဗျ…နောက်တော့..ဘယ်လိုဖြစ်တယ်..မသိပါဘူး..ကိုညီလင်းဆက်လဲ..Blog အသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ..တော်တော်ကြာကြာလေး ပျောက်သွားတယ်…အဲဒီblogလေးလည်း Update မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာ…ဘာဘဲ.ပြောပြောပါ…ကျနော်ကတော့..ဒီအစီအစဉ်လေးကို သဘောကျတယ်ခင်ဗျ…ကျနော်တောင်..စိတ်ကူးတွေဘာတွေယဉ်ပြီး..စာအုပ်ကို..နာမည် တောင်လိုက်ပေးနေမိသေးတယ်..ဗျ…“မြန်မာBloggerရပ်ဝန်း”ဆိုရင်..မကောင်းဘူးလား…ကြိုက်တဲ့သူတွေ ကြိုက်သလိုပေးကြပါ…ကျနော်ကတော့…ဒီနာမည်လေးကို..သဘောကျတယ်ဗျ….နောက်ပြီး..ဒီစာအုပ်ကလေးကို..လစဉ်ထုတ်အနေနဲ့ကြိုးစားပြီးထုတ်ဝေဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်ဗျ…ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့..Blogger များထဲမှာ..နေ့စဉ်နဲ့အမျှ..သတင်းတွေကို ဦးစားပေး ဖော်ပြပေးနေတဲ့..သူတွေတော်တော်များတယ်…ကျနော်ကတော့..Blog တွေတော်တော်များများ..လိုက်ဖတ် ရင်..မရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရသလိုခံစားရတယ်ဗျ…ကဲလေ..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်..ဒီလို..စာအုပ် စာတန်းနဲ့ဖြစ်လာတော့..ဖြစ်မြောက်အောင်..အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြရမှာပေါ့..နောက်ပြီး..ထုတ်မှာက… မြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်…Blog လိုတော့..လွတ်လွတ်လပ်လပ်..ဖော်ပြချင်တိုင်း…ဖော်ပြလို့ရမှာ..မဟုတ် ဘူးပေါ့ခင်ဗျာ…ကဲ..ကိုစိုးဇေယျရေ..ကျနော်…ဘယ်လိုကူညီရမလဲခင်ဗျာ….တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ..ကူညီ ချင်ပါတယ်….အဝေးရောက်…မြန်မာ..Blogger..များအတွက်ပါ..နည်းနည်းထည့်သွင်း..စဉ်းစားပေးပါလို့…တောင်းပန်ပါရစေခင်ဗျာ……
Tweet This Post ရောက်တက်ရာရာလေးများ March 2007